ဆင်းရဲသားများ အတွက် ချီကာကိုမြိုမှ မွတ်စလင်များ၏ လူမှုကူညီရေး လုပ်ဆောင်မှုများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကိုင်ရို။ ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘ၀တည်ဆောက်ရန် ဘာသာတရားက မောင်းနှင်ပေးခြင်းကြောင့်၊ ချီကာဂိုရှိ မွတ်စလင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက ဆင်းရဲသော အမေရိကန်များအတွက် လူမှုရေးကူညီရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
This entry was posted on February 9, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာဘာလဲ ?
တောင်စွန်း တွင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် လုပ်ကြံဖန်တီး လှုံ့ဆော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ →